Maxkamadda Racfaanka ee Kenya oo ayiday go'aan hore - BBC Somali
Maxkamadda Racfaanka ee Kenya oo ayiday go'aan hore
Image caption Baarlamaanka Kenya ayaa meelmariyay qodob sharciyeed muran badan daliyay oo ku aadan la dagaalanka argagixisada
Sideedan qodob ee muranka badan dhaliyay ee ka midka ahaa sharciga ammaanka ee dhawaantan la meelmariyay ayaa weli laalan oo aanan laga dhaqan gelin karin Kenya.
Qodobadan ayaa waxaa laalay Maxkamadda Sare kaddib markii ay arji ay kaga soo horjeedaan sharcigaasi uu gudbiyay isbahaysiga mucaaradka.
Dowladda ayaa sheegtay in sharciga ammaanka uu ka caawin doono dagaalka ay kula jirto kooxda islaamiga ah, ee Al-Shabaab, hasayeeshee mucaaradka ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay isu badeli karto dowlad kaligeed talis ah.
Qodobadan la hakiyay ayaa waxa ay awood u siinaayaan dowladda inay dhageysato isgaarsiinta iyadoon haysan amar maxkamadeed, inay xoog ku sameyso baaritaan, iyo inay xaddido tirada qaxootiga ee soo gali karta dalka.
Sharciga ayaa sidoo kale waxa uu xarig gaaraya ilaa 3 sano iyo ganaax culus uu ku soo rogayaa warbaahintii tabisaa warar u muuqdo in lagu wiiqayo baaritaanada ay boolisku ku sameeyaan argagixisada.
Dacwadda ku saabsan sharcinimada qodobadaas waxay weli ka socotaa maxkamadda sare